Dawlada Federaalka Somalia Oo Xabsiga Dhigay Wasiirkii Amniga Maamulka Juballand | HADHWADAAG NEWS
Home Warar Dawlada Federaalka Somalia Oo Xabsiga Dhigay Wasiirkii Amniga Maamulka Juballand
Dawlada Federaalka Somalia Oo Xabsiga Dhigay Wasiirkii Amniga Maamulka Juballand
Hadhwadaag(Muqdisho):-Maamulka Jubbaland ayaa sharci darro ku tilmaamay go’aankii ay dowladda Federaalka Soomaaliya xabsiga ugu taxaabtay wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur(Cabdirashiid Janan).
Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shalay wasiirka xiray ka dib markii ay ka qabteen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Balse tallaabadaas waxaa si weyn u cambaareeyay mas’uuliyiinta maamulka uu fadhigiisa yahay magaalada Kismaayo, waxayna dalbadeen in si deg deg ah loo sii daayo Cabdirashiid.
War-saxaafadeed uu maanta soo saaray maamulka Jubbaland ayaa lagu dalbaday in xukuumadda Federaalka Somaaliya ay sharraxaad ka bixiso tallaabooyinkii dhinaca sharciga ee loo adeegsaday xariga sarkaalkaas.
Dhanka kale, dowladda dhexe ayaa sheegtay in Cabdirashiid Janan uu galay dambiyo, mana aysan sheegin in maxkamad lasoo taagi doono iyo inkale.
Jubbaland ayaa sheegeysa inay aad uga walaacsan tahay nolosha, amniga iyo badqabka wasiirka Muqdisho lagu xiray.
Wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa BBC-da sharraxaad ka siiyay war-saxaafadeedka ay arrintaas kasoo saareen, wuxuuna sheegay in wasiirka la xiray isagoo xasaanad leh, meel uu ilaa hadda ku sugan yahayna aan laga warqabin.
“Shir ay guddiga amniga ee dowlad goboleedka ka yeesheen xarigga wasiirkii amniga ayuu kasoo baxay war-saxaafadeedka, waxaana dooneynaa inaan ogaanno xaaladda uu ku sugan yahay wasiirka, meesha lagu hayo iyo sababta loo qabtay intaba”, ayuu yiri Injireen Cabdi.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in dalabka warsaxaafadeedkooda uu ku aaddan yahay cid walba oo ku lug leh xarigga Cabdirashiid Janan, wuxuuna yiri: “Waa inaan fahanno sharciyadda loo maray xiritaankiisa, war saxaafadeedkeennana wuxuu ku socdaa ciddii ka dambeysay qabashadiisa, dowladda federaalka iyo garsoorka. Waan damacnay inaan la hadalno dowladda laakiin way diideen inay ka hadlaan arrintaas, wasiirkana meel lagala xiriiri karo ma jirto”.
Wuxuu intaas ku daray in wasiirka la xiray uu u baxay shaqo dowladeed, laakiin duullimaadkiisa uu sii maray Muqdisho, uuna damacsanaa inuu diyaarad uga sii gudbo.
Arrintan ayaa timid xilli uu meel aad xasaasi u ah marayo khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya xukuumadda dhexe iyo madaxda maamul goboleedka Jubbaland.
Xaaladda ayaa dagganeyd tan iyo markii ay 22-kii bishii lasoo dhaafay Kismaayo ka dhacday doorashadii madaxweynaha ee muranka badan uu hareeyay.
Dowladda Federaalka ayaa dhawaan soo sartay amar ay ku bixisay in dhammaan diyaaradaha tagaya ama ka baxaya Garoonka Kismaayo ay sii maraan garoonka Aadan Cadde.
Hay’adda duulista hawada ee Soomaaliya ayaa shirkadaha diyaaradaha ku wargelisay in dhamaan duulimaadyada caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ee kusii jeedaa Magaalada Kismayo ay soo maraan Muqdisho.
Weriyaha BBC-da ee Magaalada Muqdisho, ayaa kusoo warramay in arrintan ay u xaqiijiyeen ilo ku dhow dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Tallabadan waxay imaneysaa iyadoo toddobaad laga joogo markii ay qabsoontay doorashadii Jubaland ee uu muranka ka dhashay, taas oo uu ku guuleystay Axmed Madoobe.
Balse, lama oga sababta ay dowladda federaalka Soomaaliya u joojisay doollumaadyada caalamiga ah ee toos u taga magaalada Kismaayo.
Magaalada kismayo waxaa taga duuliimaadya badan oo isugu jiro kuwa maxali ah iyo kuwa caalami ah, waxaana sidoo kale Kismayo taga duulimaadyo kale oo ah kuwa ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Kenya.
Arrintan ayaan la ogeyn sida ay u dhaqan geli doonta iyo tallaabada ay dowladda Soomaaliya ka qaadi karto kuwa ku xadgudba amarkan.
Waxay tallaabadan uga sii dari kartaa xiisaddii u dhaxeesay dowladda Federalka Soomaaliya iyo maamulka goboleedka Jubbaland.
BBC-a oo la xiriirtay maamulka Jubaland, si aynu wax uga weydiino amarkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya, waxay sheegeen in aysan war u hayn weli ayna xaqiijinayaan arrintan, ka dibna ay ka arrinsan doonaan.
Ma cadda in go’aankan uu saameynayo dhammaan diyaaradaha caalamiga ah ee toos u taga magaalooyiinka kale ee Soomaaliya sida garoowe oo Diyaaradda Itoobiya ay tagto.
Previous articleJigjiga : Munasibad Lagu Dooranayey Xoghayaha Guud Ee Ururka Midowga Dhalinyarada Ogadeniya
Next articleGarsoore Maxkamadeed Oo Loo Heysto Fal Ay Sameysay Xilli Ay Dacwad Dhageysaneysay.